Madaxweynaha Puntland oo lagu soo dhaweeyey magaalada Guthenburg ee dalka Sweden-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweynaha Puntland oo lagu soo dhaweeyey magaalada Guthenburg ee dalka Sweden-Sawiro
Madaxweynaha Puntland oo lagu soo dhaweeyey magaalada Guthenburg ee dalka Sweden-Sawiro
May 19, 2017 - By: Abdirahman Abdi
Madaxweynaha Puntland-Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Guthenburg ee caasimada labaad ee dalkaasi Sweden.
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo weli ku guda jira safarkiisa uu ku marayey qaar ka mid ah wadamada Yurub, gaar ahaan England, Norwey, Sweden iyo Finland ayaa si ballaaran waxaa loogu soo dhaweeyey magaalada Guthenburg oo ah magaalo ay ku badan yihiin jaaliyada Puntland ee Soomaaliya.
Soo dhaweynta Madaxweynha Puntland iyo weftigiisa ayaa waxaa soo qaban qaabisay jaaliyada Puntland ee magaalada Guthenberg ee wadankaasi Sweden, waxaana ka soo qayb galay soo dhawaynta madaxweynaha qaybaha kala duwan ee Jaaliyadaha Puntland oo ay hor kacayeen odayaasha, waxgaradka, iyo aqoonyahanada jaaliyadaha.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland oo shacabkii soo dhaweeyey u mahad naqay, ayaa hadal kooban jeediyey waxaa uu si weyn ugaga mahad naqay soo dhawaynta iyo sida bilicsan ee ay usoo dhaweeyeen.
” Waxaan idin kaga mahad naqayaa sida aniga iyo weftigayga usoo dhawayseen, waana wax wanaagsan oo i farxad geliyey, waxaadna noo muujiseen dareen wanaagsan oo yididiilo wanaagsan igu abuuray, waana idin ka mahad naqayaa “, ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Ugu danbayn Madaxweynaha Puntland ayaa ku sugnaan doonaa mudo labo maalmood magaalada Guthenberg, kadibna uga sii gudbi doonaa caasimada wadanka Finland ee Helsinki halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono Jaaliyadaha Puntland iyo guud ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaasi.